Hay’adda NESHA oo dayactir ku bilowday wadada isku xirta Bosaso iyo Qardho – Radio Daljir
Oktoobar 16, 2012 5:54 b 0
Qardho, Oct, 16 – Hay’adda dayactirka wadooyinka u qaabilsan Puntland ee NESHA ayaa bilowday mashruuc ay ku dayactirayso wadada laamiga ah ee isku xirta Bosaso iyo Qardho.
Wadada uu dayactirkeedu bilowday ayaa dhawaan uu soo wajahay burbur kooban, oo ay cabasho ka muujiyeen dad waynaha iyo qaar ka mid ah gaadiidka isu kala gudba magaalooyinka waawayn ee Puntland.
Dayactirka ayay hay’addu ka bilowday wadooyinka mara tuulooyinka Sheerbi,Goodcad, Yako iyo tuulada Shirre oo ka mid ahaa goobaha inta ugu badan ay shilalku ka dhacaan.
Agaasimaha hay’adda NESHA Eng. Cismaan Xasan Cali oo Daljir uga waramay hagaajinta wadooyinkan ayaa sheegay inay xooga saarayaan dayactirka wadooyinkii saamaynta ay ku yeesheen roobabkii dhawaan ka da’ay Puntland, sidoo kallena ay hay’addu dayactir ku bilowday wadada Kala-beer ilaa iyo tuulada Laag oo daadad ka yimid toggaga mara dhawaan burbur ay gaarsiiyeen kadib roobabkii ku da’ay.
Hay’adda NESHA ayaa horay mashaariic hagaajineed uga samaysay wadooyin badan oo laamiga ah, kadib markii burbur uu soo wajahay.